खगोल बिरालो चट्याङ बक्स खेल एक चिनियाँ THEMED स्लट खेल हो. चिनियाँ THEMED स्लट खेल को एक नम्बर त्यहाँ छन्, तर यो एक किनभने गेमप्लेको अद्वितीय खडा. Lightning Box is one company that has been creating games that have an out of the box creativity behind them. यो खेल अझै अद्वितीय र रमाइलो खेल आफ्नो सूचीमा अर्को प्रभावशाली वाहेक. खेल पनि केही राम्रो ग्राफिक्स धेरै राम्रो गेमप्लेको compliments जो छ. साथै, यो एक बोनस स्लट कुनै जम्मा आवश्यक.
बिजुली बक्स गणितज्ञ द्वारा स्थापित भएको थियो कि एक स्लट खेल विकासकर्ता छ. तिनीहरूले निरन्तर आफ्नो स्लट खेल थप रोचक बनाउन नयाँ र राम्रो गणितीय मोडेल बनाउन प्रयास. त्यसैले, अर्को समय तपाईं एक चट्याङ्ग बक्स स्लट खेल्न निर्णय, केही फरक आशा.
खेल लोगो आफै जंगली रूपमा सेवा गर्दैछन्. यो रील मा देखिन्छ 3,4र छरिएका प्रतीक को अपवाद संग सबै अन्य प्रतीकहरू लागि विकल्प रूपमा कार्य. यो प्रतीक एकदम उपयोगी छ र तपाईं प्राय छैन भन्दा विजेता payline गठन गर्न मद्दत गर्छ.
को Reelfacta रील यो खेल को मुख्य आकर्षण छ. यो वास्तवमा खेल बीचमा रील छ तर यसलाई मा4विभाजित छ×4 ग्रिड होस्टिंग 16 प्रतीक. अब प्रतीक संग, त्यहाँ अवतरण विजेता paylines एक वृद्धि मौका छ. तर Reelfacta रील प्रत्येक प्रतीक एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ. को रील पनि महत्वपूर्ण भूमिका निःशुल्क spins बोनस राउन्ड समयमा खेल्न छ.
यहाँ ग्रिड यसरी wilds multifold विजेता को आफ्नो संभावना वृद्धि भरिएको छ. पछि यो एक बोनस स्लट कुनै जम्मा आवश्यक यो खेल आफ्नो लाभ टाढा आफ्नो आशा भन्दा बढी हुनेछ.
यो जब क्लासिक स्लट तुलनामा एक tweaked गेमप्लेको एउटा नयाँ उमेर स्लट छ. को विशाल 1296 जीत तरिका पक्कै तपाईंले यो स्लट देखि धनी लाभ कटनी मदत गर्नेछ. यसरी, यो एक हो यो एक स्पिन विशेष गरी लायक छ कि एक स्लट छ बोनस स्लट कुनै जम्मा आवश्यक.
Coinfalls मोबाइल स्लट मा फोन फल स्लट खेल